Izindawo Zokudla Nokuphuza
Nambitha futhi Savor
Ukudla nesiphuzo eKildare
Isiko lokudla neziphuzo likaKildare liyachuma. Ngezindawo zokudlela, imigoqo, ama-gastropub, izindawo zokuphisa utshwala ezincane kanye nezindawo zokudlela ezinhle, isifunda sizimisa njengenye yezindawo ezijabulisa kakhulu zase-Ireland zokudla.
Izindawo ozivakashelayo zingakhuluma izindaba ezimnandi njengokudla uqobo. E-Kildare, ukuphuma kosuku kungafaka i-Irish ephelele kusuka kwikhefi elithulile, inhlanzi namachips avela ku-canal-side bistro, isidlo sasemini esikhuliswe ekhaya enqolobaneni yaseScandinavia, noma ipikinikini emnandi emagcekeni enqaba. Futhi ukuphuma kusihlwa, ikakhulukazi emadolobheni nasemadolobhaneni ethu, kungakususa lapho usuka khona endaweni oyster bar uye endaweni yokudlela enezinkanyezi zaseMichelin, indawo yokuhlala yezihambi, indawo yokudlela efudumele, noma indawo enobungane yomndeni ebheke kulo mfula. Ungakhohlwa ukujabulela isiphuzo sezandla — noma ezimbili — endleleni.
Nanku umqondo: yeka ukufunda ngakho konke lokhu okuhle, bese uza lapha uzonambitha ngokwakho.
VOTE: I-Carvery ehamba phambili kaKildare
UKildare Uyazihlanza Emiklomelweni Yokudlela
Indawo yokudlela yaseKildare iklonyeliswe 'iresiphi yonyaka'